स्नापच्याट डिस्मोफिया अर्थात् सेल्फी मोह — samadhannews.com
स्नापच्याट डिस्मोफिया अर्थात् सेल्फी मोह
, १२ भाद्र:
– पहिलोपटक सन् २०१५ मा थाहा भएको स्नापच्याट डिस्मोफिया पछिल्लो समय तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा प्लास्टिक सर्जनलाई चुनौती थपिएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा भएका पछिल्ला अनुसन्धानबाट यो खुलेको छ कि पहिले जस्तो मानिसमा सेलिब्रेटी जस्तो देखिने मोह भंग भएको छ ।
अहिले मानिसमा सकेसम्म आफैं नै राम्रो देखिने र त्यसलाई अझै बढाउँदै लैजाने टेन्डेन्सी बढेको छ । यसको अर्थ, विशेष गरी तस्बिरमा आफू राम्रो देखिन चाहने क्रम बढेको छ ।
स्मार्टफोनको फ्रन्ट–फेसिङ क्यामरा प्रयोग गरेर खिचिएका तस्बिरलाई मिलाएर पोस्ट गर्न मिल्छ, यसले गर्दा मानिस सकेसम्म आफूलाई अझै राम्रो बनाएर पोस्ट गर्न चाहन्छन् ।
सेल्फीमा राम्रो देखिनकै लागि प्लास्टिक सर्जरी गर्नेहरुको मात्रा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । गएको वर्षको प्रतिवेदनमा प्लास्टिक सर्जनलाई उनीहरुका क्लाइन्टले दिएको जानकारीअनुसार ५५ प्रतिशत भन्दाले सेल्फीमा राम्रो देखिनका लागि प्लास्टिक सर्जरी गराएका छन् ।
मेडिकल जर्नल जामाको पछिल्लो सम्पादकीयअनुसार अमेरिकाको बोस्टन युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिसिन्स डम्र्याटोलोजी डिपार्टमेन्टको तथ्यांकमा मानिस प्लास्टिक सर्जनलाई ओठ ठूलो बनाउन, आँखा ठूलो बनाउन वा नाकलाई सानो बनाउन आग्रह गर्दै जाने गरेका छन् । उनीहरु आफूलाई फोटो विशेष गरी सेल्फीमा राम्रो देखाउन चाहन्छन् ।
यसलाई स्नापच्याट डिस्मोफिया भन्ने गरिएको छ । पहिलोपटक सन् २०१५ मा थाहा भएको स्नापच्याट डिस्मोफिया पछिल्लो समय तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा प्लास्टिक सर्जनलाई चुनौती थपिएको छ ।
सेल्फीमा राम्रो देखिनकै लागि प्लास्टिक सर्जरी गराउनेमा २० देखि ४० वर्ष उमेरका धेरै रहेको अनुसन्धानमा संलग्न बोस्टन विश्वविद्यालयको कस्मेटिक एन्ड लेजर सेन्टरकी निर्देशक डा. नीलनम वाशीले बताइन् ।
डा. वाशी भन्छिन्, ‘आफू राम्रो देखिन चाहनु जीवनको सामान्य र प्राकृतिक पक्ष हो । तर सामाजिक सञ्जालले पछिल्लो समय सुन्दरताको असामान्य अवधारणालाई बढाएको छ ।’
अमेरिकन एकेडेमी अफ फेसिअल प्लास्टिक एन्ड रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरीको तथ्यांकअनुसार प्लास्टिक सर्जरी गराउनेमा धेरै ३० वर्षभन्दा मुनिका छन् र त्यसमा पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी आफ्नो लुक्सलाई राम्रो बनाउनकै लागि आउने छन् ।
चुनौती बढे पनि धेरै प्लास्टिक सर्जनले अहिले पनि स्नापच्याट डिस्मोफियालाई गम्भीर रुपमा लिएका छैनन् । र यो पूर्णरुपमा खराब नरहेको उनीहरुले बताउने गरेका छन् । स्नापच्याट डिस्मोफियाले नकारात्मक प्रभाव पर्ने भए पनि राम्रो सेल्फीबाट दिनको सुरुआत गर्नु सकारात्मक हुने न्युयोर्क सिटीका प्लास्टिक सर्जन ड्यानिएल मामानले बताएका छन् ।
दिनमा कम्तीमा एकजना क्लाइन एडिटेड सेल्फीसहित त्यस्तै देखिने मोहका साथ आफ्नो क्लिनिकमा आउने गरेको उनले बताएका छन् । क्लाइन्टले सेल्फी लिँदा आफ्नो लुक्स केही एंगलबाट राम्रो नदेखिएको भन्दै आउने क्रम बढेको डा. वाशीले पनि बताएकी छन् ।
सेल्फी लिँदा क्यामरा धेरै नजिक हुने भएकाले नाक, आँखा वा ओठ अलि फरक देखिने गरेको छ । १२ इन्च पर क्यामरा राखेर लिइने सेल्फीमा पुरुषको नाक भएको भन्दा ३० प्रतिशत ठूलो र महिलाको २९ प्रतिशत ठूलो देखिने गरेको छ ।
रोचक/ विचित्र सम्बन्धीत
सिद्धगुफाभित्र टेबलटेनिस प्रतियाेगिता
वल्र्डकपमा प्रयोग गरिएको टेलस्टार–१८ के हो ?
यस्तो जेल, जहाँ कैदीलाई सुविधा र प्रेम वर्जित छैन
सिंगल गर्ल ‘प्राप्ती’
सेक्स रोबोट ‘हार्माेनी’ले भुलाउनेछ दुनियाँलाई
‘संसारकै पुरानो वाइन’